Ikusasa likaZuma lincike ezingxoxweni zakhe noRamaphosa - Magashule | News24
Ikusasa likaZuma lincike ezingxoxweni zakhe noRamaphosa - Magashule
Durban – UMengameli Jacob Zuma uyena ozokwethula inkulumo ebhekiswe esizweni (SONA), futhi asikho isinqumo esesithathiwe ngokumehlisa esikhundleni, kusho uNobhala Jikelele we-ANC u-Ace Magashule.
UMagashule ukhulume nephephandaba i-The Mercury eThekwini ngemuva kwesithangami sabezindaba obekwethula kusona i-ANC provincial task team eKZN, okuyithimba elizobamba izintambo njengoba kusamiswe isigungu esiphezulu se-ANC kulesi sifundazwe.
“Uzokwethula inkulumo yesizwe njengoba esanguMengameli wezwe,” esho.
OLUNYE UDABA: Kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuso sowe-ANC
Bekunamahlebezi athi uZuma uzokhishwa esikhundleni noma aphoqwe ukuba esule ngaphambi kwe-SONA engoFebhuwari 8.
Amanye amahlebenzi athi uzobe evalelisa enkulumeni azoyethulela isizwe ngalolo suku.
Nakuba kunjalo, uMagashule uthi ikusasa likaZuma alincikile ekutheni iningi lamalungu esigungu esiphezulu se-ANC athini, kunalokho lincike ezingxoxweni eziphakathi kwakhe uZuma noMengameli we-ANC, uCyril Ramaphosa.